काठमाडौं, १७ असार । नेपालका लागि नवनियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तवले ओहदारको प्रमाणपत्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेपछि औपचारिक कार्य सुरु गरिसकेका छन् । उनले
गठबन्धन तोडेर ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलाउन वामदेव सफल होलान्
काठमाडौं, १७ असार । यतिबेला वामदेव गौतम नेकपालाई ब्युँताउने कसरतमा छन् । यो सजिलो भने छैन । नेकपा फुटेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुनः जिवित भइसकेको छ ।
काठमाडौं, १६ असार । नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन् । आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि राजदूत श्रीवास्तव देउवालाई भेट्न पुगेका
भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाए ओहदाको प्रमाणपत्र
काठमाडौं, १६ असार । नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् । उनले आज राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका हुन् । ओहदाको
ओली-प्रचण्ड मिलाउन वामदेव सक्रिय
काठमाडौं, १६ असार । नेकपा एकता अभियान लिएर सक्रियता बढाएका वामदेव गौतमले आज महत्वपूर्ण भेटहरु गरेका छन् । उनले बालकोट पुगेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटे । भेटमा
आरजुलाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौं, १६ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ । उनी संक्रमित भएपछि केही दिनयता बालुवाटारमै क्वारेनटाइनमा बसेको बुझिएको छ । आरजुलाई शिघ्र स्वास्थ्यलाभको
एजेन्सी, १६ असार । अमेरिकाले गरेको हाइपरसोनिक मिसाइलको परीक्षण असफल भएको छ । बुधबार हवाइमा उक्त परीक्षण असफल भएको ब्लुमवर्गको रिपोर्टमा उल्लेख छ । पेन्टागनको स्रोत उल्लेख गर्दै ब्लुमवर्गले परीक्षणमा
गगन थापाले शेखर गुट छाडे
काठमाडौं, १६ असार । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले डा. शेखर कोइरालाको गुट छाडेका छन् । उनी पछिल्लो समय शेखर गुटको भेलामा जान छाडेका छन् । आज वत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा
उपेन्द्रको निर्णय देउवाले कार्यान्वयन गर्न नमानेपछि जसपाका मन्त्री यथावत्
काठमाडौं, १६ असार । जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्णय एकल भनिदिए । उनले उपेन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजे आफूसँग रहेका सांसदहरूले
देश श्रीलंकाको दिशामा जान लागेको निष्कर्ष निकाल्दै शेखर समूहले देख्यो ‘विद्रोह’
काठमाडौं, १६ असार । नेपाली काँग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले देश श्रीलंकाको दिशामा जान लागेको निष्कर्ष निकालेको छ । आज अनुपम फुडल्यान्ड वत्तीसपुतलीमा आयोजना गरेको आफू पक्षीय भेलाले त्यस्तो निष्कर्ष
जुरेलीको हिलोमै युवकसँग रेस्लिङ्ग भिडन्तपछि करिश्मा टाप
काठमाडौं, १६ असार । जुरेलीले हीलोमै रेस्लिङ्ग खेल्नुपर्यो । त्यो पनि बलिष्ठ शहरीर भएकासँग । १५ असारको राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन युवा संघको कार्यक्रममा भैंसेपाटीमा पुगेकी थिइन् रेस्लर जुरेली ।